प्रचण्डले ‘लुकाएको’ अर्बौंको अभौतिक सम्पत्ति - कान्तिखबर – सम्पुर्ण समाचार हामीसँग
९ माघ २०७७, शुक्रबार , ०४:३४
बिचार/बिमर्श विशेष समाचार
प्रचण्डले ‘लुकाएको’ अर्बौंको अभौतिक सम्पत्ति
२०७७ श्रावण २३, शुक्रबार १७:४८ गते प्रचण्डले ‘लुकाएको’ अर्बौंको सम्पत्ति
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमाथि ठूलो बहस सुरु भएको छ । बहसको केन्द्रमा प्रचण्ड छन् । एकथरी ‘विद्वान’, ‘बौद्धिक राजनीतिज्ञ’ (माफ गर्नुहोला-योगेश भट्टराईको नाम लेख्न बाध्य भएकोमा), लेखक र पत्रकार छन् । अर्कातर्फ प्रचण्डका समर्थक र आम जनता छन् ।
बहसको केन्द्रमा रहेका प्रचण्डमाथि आरोप छ- ‘उनले सम्पत्ति विवरण लुकाए, उनले छलढाँट गरे ।’ अर्काथरीले प्रतिवाद गर्दैछन्- ‘प्रचण्ड सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिको आलोकमा हुर्केका नेता हुन्, उनीसँग सम्पत्ति कहाँबाट आउनु ? न उनले भ्रष्टाचार गरे, न नातागोता पोस्ने कुरालाई नै केन्द्रमा राखेर राजनीति गरे । राजनीति स्वयम्सेवा हो भन्दै आफ्नो जीवनलाई हत्केलामा राखेर हिँडेका प्रचण्डसँग कहाँबाट सम्पत्ति आउनु ?
लेखक गोकर्ण भट्ट
शान्ति प्रक्रियामा आएपछि प्रचण्ड सरकारमा गए । सरकारमा जाँदा उनले ‘प्रभु’हरुको बिरोध गरे । प्रभुहरुको इशारामा चलेको दलाल नोकरशाहीतन्त्रले प्रचण्डलाई देखी सहेन । प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्‍यो । यो श्रृंखला निरन्तर चल्यो । देशमा संविधान बन्ने अवस्थ्ाा भएन । तर, विभिन्न घुम्तीको बाटो पार गर्दै प्रचण्डले १६ बुँदे सम्झौताका लागि नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई सहमत तुल्याउन सफल भए ।
हो आलोचक कमरेडहरु, प्रचण्डसँग यही ममता छ, देशका लागि । यही कर्तव्य र कसम छन् देशका लागि । यही हो उनले लुकाएको अर्बौंभन्दा बहुमूल्य सम्पत्ति । सक्छौ भने यो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने आँट गर ।
ताजा प्रदेश ३ ब्रेकिन विशेष समाचार
नागढुंगाबाट स्रोत नखुलेको ३७ लाख रुपैयाँसहित चितवनका १ जना पक्राउ, बैंकको चेकसमेत बरामद
२०७७ पुष २७, सोमबार २१:२१ गते कान्तिखबर
२०७७ पुष २३, बिहीबार १८:४१ गते कान्तिखबर
पत्रपत्रिकाः मुख्य समाचार विशेष समाचार
२०७७ पुष २१, मंगलवार १९:४५ गते कान्तिखबर